Iindaba - KUTHENI UKHETHA US?
I-OUSHENGXI iqinisekisa umgangatho owufunayo njengoko sisebenzisa izixhobo ezahlukeneyo ukuzonwabisa kunye nokuvavanya iimveliso eziza kuziswa. Zonke izinto ezenziwayo zinamathela kwimigangatho yolawulo lwe-ISO esemgangathweni yokuqinisekisa umgangatho we-100%
E-OUSHENGXI, sinikezela ngexabiso kuwe 24/7/365 okuthetha ukuphendula kwethu ngokukhawuleza kwiimfuno zakho ezingathandekiyo kwaye uya kufumana ingqwalaselo kwangoko kunye nelona nyathelo lilungileyo lokujongana neemfuno zakho zokwenza ifom yethu yeengcali ezinolwazi.
I-OUSHENGXI iguqula ubudlelwane obomeleleyo beemfuno zeminyaka yokusebenza kwaye inesiseko esikhulu sabathengi kwihlabathi liphela.siqhubeka nokuphonononga ubambiswano olusebenzayo kunye nabathengi bethu abahloniphekileyo ngokunika izisombululo ezinokuthenjwa njengetoni ebesimise kwasekuqaleni.
UKUHLANGABEZANA NEEMFUNO ZOMNTU NGAMNYE
I-OUSHENGXI ibonelela ngeendlela ezininzi zokufumana isisombululo esisebenza kakuhle kuwe, ukuhlangabezana nazo zonke iintlobo zeemfuno yile nto siyenzayo, nento esiyixabisayo, sisebenzisana ngokubonakalayo nabathengi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo o kushishino.
NGOKU EHLABATHINI, kuba intsholongwane, bonke abathengi abakwimeko embi, i-OUSHENGXI BOSS ilungiselela iimaski kunye noncedo olukhululekileyo kubathengi .usapho olufudumeleyo, wamkelekile ukuba uthathe inxaxheba nosapho lwethu olukhulu.